Imandarmedia.com.np: यस्तो छ तपाईंको २०७४ साल ! हेर्नुस् बर्षभरिको राशिफल
Main News, News, Title Big News » यस्तो छ तपाईंको २०७४ साल ! हेर्नुस् बर्षभरिको राशिफल
यस्तो छ तपाईंको २०७४ साल ! हेर्नुस् बर्षभरिको राशिफल
२०७४ सालभरिको सम्पूर्ण राशिफल दैनिक नेपाललाई प्राप्त भएको छ । थाहा पाउनुहोस् तपाईंको बर्षदिनभरको राशिफल:
बृष :- भदौसम्म नोकरीमा रहेका समस्या समाधान हुनेछन् भने भाग्यले साथ दिने कारण थोरै परिश्रमले अधिक फाइदा कमाउन सकिनेछ । हरेक काममा असल मित्र र आफन्तको सहयोग रहनुका साथै पराक्रम समेत बढ्नेछ । अध्ययनको रुचीले शिक्षा क्षेत्रमा प्रगति हुनेछ । धन बढ्ने, उन्नति प्रगतिमा राम्रो जाँगर आउने। छोरा-छोरीबाट उपलब्धिपूर्ण काम हुने देखिन्छ भने त्यसपछी श्रीमती तथा कुटुम्बसँग विवाद पर्ने, अग्नि, विजुली इत्यादिबाट नोक्सानीको भय रहने र शत्रूबाट अनेक प्रकारको बिघ्न बाधपरी रहने देखिन्छ। राजनैतिक क्षेत्रमा विरोधीहरु सक्रिय रहने कारण अपमान सहनुपर्नेछ । ब्यापारमा नियमितता रहला । नयाँ सोच र नयाँ कार्यको शुभारम्भ यो वर्ष हुनेछ । भ्रमण र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा खर्च वृद्धि हुनेछ । जेठ, असोज र माघ महिनामा झण्झट र विवाद हुनेछ ।
कर्कट:- वर्षको शुरुमा कुटुम्बसँग विवाद, बिघ्नबाधा मात्रै पर्ने, मानशिक अशान्ति बढ्ने, ठाउँ परिवर्तन गर्नु पर्ने , दाजु भाइमा विवाद पर्ने, लेखाइ पढाइमा जागर नलाग्ने र उचित ध्यान नदिइदा शिक्षा क्षेत्र सबल रहने छैन । तर भदौ पछी वैदेशिक क्षेत्रका अधुरा काम बन्ने र नयाँ कामको अवसर हात पर्नेछ । महत्वपूर्ण काम बन्ने र आकस्मिक धनको लाभ भई नै रहनेछ । वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने र सन्तान प्राप्तिको समेत उत्तम लक्षण देखिन्छ । तपाईंको प्रगतिमा डाहा गर्नेहरु शरणमा आउनेछन् । असार, कात्तिक र फागुन महिना स्वास्थ्य र खर्चका दृष्टिकोणले अशुभ रहनेछन् ।
तुला:- भदौसम्म शोक आइलाग्ने, र्व्यर्थको विवादमा अल्भिनु पर्ने, धनहानी, अनिष्ट खवर पाइने , मनमा अनावश्यक डरले सताउने छ। धनहानी, अनिष्ट खवर पाइने , मनमा अनावश्यक डरले सताउने छ। तर त्यसपछी गुरु अनुकूल रहनाले पठनपाठन क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुनेछ । साझेदारी ब्यवसायमा विवाद पर्ने र स्व-व्यवसाय फस्टाउनेछ । वैदेशिक क्षेत्रको काम कडा मेहनेत र निरन्तरको प्रयासबाट बन्नेछ । जग्गा जमिन तथा सवारी साधनको खरिद गर्ने योग राम्रो छ । जेठ, असोज, र माघ महिनामा काम नबन्ने र खर्च बढ्नेजस्ता अशुभ फल हुनेछ ।
मकर:- परिवारमा आउने विवादले मन अस्थिर बन्नेछ । बोलीको असंयमताले झुट्टा आरोप लाग्ने र मनमुटाव समेत हुनेछ । नोकरीमा ख्याति बढ्नेछ । नयाँ सोच विचार र लगानीका माध्यमहरु तछाड/मछाड गरेर आउनेछन् । व्यापार व्यवसायको वृद्धिले आर्थिक सन्तुलन कामय राख्न मद्धत गर्नेछ । शत्रुहरु प्रतिष्ठा गिराउन तल्लीन रहेनछन् । धार्मिक गतिविधीमा आस्था बढ्नेछ । इष्टमित्रहरु सहयोगी बन्नेछन् । राजनीतिमा सम्मानित हुने अवसर नआउला भन्न सकिन्न । राम्रो नोकरीको प्रस्ताव आउनाले मनमा द्विविधा छाउनेछ । वैदेशिक कार्यले लाभान्वित भइनेछ भने रमाइलो एवं नयाँ ठाउँको भ्रमण हुनेछ । परिवार एवं सन्तानमा आउने स्वास्थ्य समस्याले चिन्ता थपिनेछ । लेखन साहित्य क्षेत्रबाट मान-सम्मान पाइनेछ । असार, असोज, कार्तिक र मंसिर महिना आर्थिक दृष्टिले शुभ रहेका छन् । शत्रु बढ्ने कारण अरुको विषयमा चासो राख्नु उचित हुनेछैन । प्रेम प्रसंगले तनाव निम्त्याउन सक्छ ।
कुम्भ:- वर्षको मध्यसम्म बन्धनमा पर्नु पने , रिस ज्यादा उठ्ने, मनमा डर बनि रहने , कतैबाट अनिष्ट र अशुभको खबर सुन्नु पर्ने भएता पनि भदौ पछी धनप्राप्ति, आराम मिल्ने , पत्नी छोरा छोरीबाट सहयोग राम्रै हुने । औद्योगिक व्यवसायको सञ्चालन राम्रो रहनेछ। अनेक किसिमका रत्नलाभ, घर निर्माण र जग्गा जमिन खरिद विक्रीको योग छ । कला क्षेत्रमा लागेकालाई फलदायी वर्ष छ । धनलाभका नयाँ स्रोतहरु बढ्नेछन भने व्यापार व्यवसाय सोचेअनुरुप चल्नाले मनग्य धनलाभ हुनेछ । पठनपाठनमा रुची बढ्नाले शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ ।
मीन:- वर्षको मध्यसम्म राजकीय सम्मान, सरकारी कर्मचारीबाट सहयोग राम्रो पाइने। स्वास्थ्य राम्रो रहने । जुनसुकै कार्यमा सफलता राम्रो पाइने । कुनै नयाँ व्रत, पर्व, उत्सवमा सहभागी हुन पाइने भएता पनि त्यसपछी कुनै कतैबाट अनिष्ट र अशुभको खबर सुन्नु पर्ने । अरुको बहकाउमा लागेर साझेदारी काममा लगानी गर्नु उचित नभएको कारण साझेदारी व्यवसायमा हात नहाल्नु नै उचित हुनेछ । गलत सल्लाह सुझावले गलत ठाँउमा फस्न सक्ने कारण खानपिन र साथी संगतीमा सजगता अपनाउनु उचित हुनेछ । असार, कार्तिक र फागुन महिना कष्टदायक रहेका छन् ।